ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): Burmese women used as sex slaves in Chinese night club
ဒီလိုသတင်းတွေ ဖတ်ရတိုင်း ရင်ထဲက ဒေါသတွေက အလိပ်လိပ်တက်လာပါတယ် .. ။ မတရားသော စေခိုင်းမှုတွေ ၊ မတရားသော အဓမ္မအနိုင်ကျင့်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာ အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ပါပဲ ။ ဒီသတင်းထဲမှာပါတဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသူလေးတွေက သူမတို့ရဲ့ ဆန္ဒတစ်စုံတစ်ရာမပါဘဲ အတင်းအဓမ္မလိင်ဖျော်ဖြေမှုကို လုပ်ပေးနေခဲ့ရတာပါ .. ။ ပုံမှန်လစာလည်း ရခြင်းမရှိ ၊ အပြင်လောကနဲ့လည်း အဆက်သွယ်မရဘဲ ဒီအကျဉ်းခန်းထဲမှာပဲ ခိုင်းတာလုပ်ပေးရရင်း ရောဂါတွေရ ၊ သေဆုံးသွားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကပွဲအတွက်ဆိုပြီး လိမ်ခေါ်ခံရ ၊ ရောင်းစားခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဘ၀တွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးရှိနေပါတယ် ။ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဆိုတာ ကျွန်မတို့နဲ့ တမြေတည်း မောင်နှမတွေပါပဲ ။ ဘယ်တိုင်းရင်းသား ၊ ဘယ်လူမျိုးကိုမှ စော်ကားတာ ကျွန်မ မကြိုက်ပါဘူး .. ။ ကြွေလွင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ ဘ၀တွေအတွက် ၊ ရှေ့ဆက်ပြီး ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ် ။ ကောင်းမွန်သော စနစ် ၊ ခိုင်မာသော ဥပဒေ ၊ ခိုင်မြဲသောစီးပွားရေး ၊ သိသင့်သိထိုက်သော အသိပညာ နှင့် အတတ်ပညာ .. အားလုံးရှိနေမယ်ဆိုရင် ပန်းတစ်ပွင့်လို ဖူးပွင့်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ဘ၀ မတရားစေခိုင်းခံရ ၊ ကြွေလွင့်သွားတာတွေ ပျောက်ပျက်သွားမယ်ဆိုတာ ကျွန်မ ခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ပါတယ် .. ။ အဲဒီအတွက် ကျွန်မတို့အားလုံး အများကြီးဆက်ကြိုးစားသွားရမယ်ဆိုတာ ကျေးဇူးပြုပြီး မမေ့ကြပါနဲ့ .. ။
Women and young girls from Burma are being used as sex slaves inanight club in Hangzhou in China's Zhejiang province near Shanghai,apopular tourist resort on the East China Sea coast, said girls from the night club who escaped.
A 10th grade schoolgirl, aged 17, from Namkham Village in Northeast Shan State who escaped from the night club last month told KNG that she had been deceived and invited to joinaKachin Traditional Dancing Club in Kunming in China's Yunnan Province and then sold to the night club owners.
A member of the Sino-Burma border trade zone, Muse based Kachin Youth Organization, which is aware of trafficking in women from Kachin to China, said they have recorded over 80 Kachin girls being taken away from Namphakka (Nam Hpak Ka), Namkham, Homong, Di Ma, Dat Nai, Mongbaw, Monggu, Kutkai, Kawng Hka in areas controlled by Kachin Defence Army (KDA) in Muse. They were sold to Chinese businessmen by traffickers as of 2004.
In May, 2005, the Thailand-based Kachin Women's Association (KWAT) inareport -- ''Driven Away—Trafficking of Kachin women on the China-Burma border'' revealed that over 62 Kachin women from Kachin State and Northeast Shan State were sold to China during 2000-2004.
Posted by LIN LET KYAL SIN at 12:35 PM